လူရည်ချွန်တံဆိပ် ရှင်းလင်းဖေါ်ပြချက် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လူရည်ချွန် နှစ် ၅၀ ပြည့် ရွှေရတု 1964-1988
သမိုင်းထဲက လူရည်ချွန်များ »
ငွေရောင်ငါးထောင့်ကြယ်တွင် စပါးနှံနှစ်ခက် ၀န်းရံထားသည့် ရွှေရောင်ပြား ပါရှိသည်။ ၎င်းရွှေရောင်ပြား၏ အလယ်တွင် ခွေးသွားစိတ် ၁၂ ခုပါသည့် စက်သွားစိတ် (ပင်နီယံ) ရှိပြီး၊ ရွှေရောင်ပြား၏ အပေါ်ထိပ်တွင် လူရည်ချွန်ဟူသော စာတမ်းနှင့် စက်သွားစိတ်၏ အလယ်တွင် ခုနှစ် သက္ကရာဇ်ကို ရေးထားသည်။
တံဆိပ်၏ အဓိပ္ပါယ် ရှင်းလင်းချက်
ကြယ်။ ။ တော်လှန်ရေးအလံ၏ အထိမ်းအမှတ်သဘော၊ နိုင်ငံ၏ ချီးမြှင့်မော်ကွန်းတင်သည့် သဘော၊ ခရီးလမ်းကို မရပ်မနား သွားတတ်ခြင်း၊ သွားမြဲခရီးကို မစွန့်လွှတ်တတ်ခြင်း၊ အဖန်တလဲလဲ ရှေ့သို့တက်နေခြင်း၊ ခရီးသည်တို့၏ လမ်းညွှန်ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် အလင်းရောင်ဖြင့် ထွန်းလင်းခြင်း စသော သဘောရှိသည်။ ငွေသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကြယ်မှာ ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ မှန်ကန်ခြင်း၊ တည်ကြည်ခြင်း အဓိပ္ပါယ် ဆောင်သည်။ ကြယ်၏ ထောင့်ငါးထောင့်သည် လူငယ်သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန် (၅) ချက်ကို ဖေါ်ပြသည်။
စပါးနှံ။ ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တခုလုံး၏ အားထားရာ အသက်သွေးခဲအဖြစ် သရုပ်ဖေါ်ပြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက အားထားနေသည့် တိုင်းပြည်နှင့် လယ်သမားတို့၏ ဘ၀တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ရှေးရှုလုပ်ဆောင်ကြမည် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။
စက်သွားစိတ်။ ။ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းကို သရုပ်ဖေါ်ပြသည်။ တိုင်းပြည်အား စက်မှုလက်မှု နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိရေးကို ရှေးရှု လုပ်ဆောင်ကြမည် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ ခွေးသွားစိတ် ၁၂ ခုသည် ရှေ့ဆောင်လူငယ် ကျင့်ဝတ် ၁၂ ပါးကို သရုပ်ဖေါ်ပြသည်။ ရွှေရောင်ပြားသည် အဘိုးတန်ခြင်း၊ မှေးမှန်မှုမရှိခြင်း အကြောင်းကို ဖေါ်ပြသည်။
ဂ။ တံဆိပ်အကြောင်း ဖေါ်ပြချက်
လူရည်ချွန် တံဆိပ်သည် လူရည်ချွန် ၀တ်စုံ၏ လက်ျာရင်ဘတ် အိတ်၏ လက်နှစ်လုံး အမြင့်တွင် တပ်ဆင်ရမည်
(ခခ) နှစ်ထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်
နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် လူရည်ချွန်ဆု ရသူသည်၊ လူရည်ချွန် နှစ်ထပ်ကွမ်း ဖြစ်သည်၊ ယခင်နှစ်က ရရှိသည့် လူရည်ချွန် တံဆိပ်၏ ညာဘက်တွင် ယှဉ်တွဲ၍ နောက်ဆုံးရရှိသည့် လူရည်ချွန် တံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ထားရမည်။
(ဂဂ) သုံးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်
သုံးနှစ်ဆက်တိုက် လူရည်ချွန်ဆု ရသူသည်၊ လူရည်ချွန် သုံးထပ်ကွမ်းဖြစ်သည်၊ သုံးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်များအတွက် စက်ဝိုင်းတွင်းတွင် ကြယ်သုံးလုံးပါသည့် လူရည်ချွန် သုံးထပ်ကွမ်း တံဆိပ်တခုကို သီးခြား ပေးပါသည်။ လူရည်ချွန်များသည် ယင်းသုံးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်တံဆိပ် တခုထဲကိုလည်း တပ်နိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သော လူရည်ချွန် တံဆိပ်သုံးခု ကိုလည်း ဘယ်မှညာသို့ အစဉ်အလိုက် တပ်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်၊ ဘယ်အစွန်ဆုံးတွင် ပထမဆုံး တံဆိပ် တပ်ဆင်၍၊ အလယ်တွင် ဒုတိယနှစ်၊ ညာအစွန်တွင် နောက်ဆုံးနှစ် ရရှိသည့် တံဆိပ်တို့ကို တပ်ဆင်ရပါမည်။
မှတ်ချက်။ ။ သုံးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်တံဆိပ် တပ်ဆင်သောအခါတွင် လူရည်ချွန်တံဆိပ်များကို မတပ်ဆင်ရပါ။
(ဃဃ) လေးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်
လေးနှစ်ဆက်တိုက် လူရည်ချွန်ဆု ရသူသည်၊ လူရည်ချွန် လေးထပ်ကွမ်း ဖြစ်သည်၊ နောက်ဆုံး ရရှိသည့် လူရည်ချွန်ဆု တခုသာ တပ်ဆင်၍ ၎င်းဆုတံဆိပ်၏ အပေါ်မှ သုံးထပ်ကွမ်း တံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ရမည်။
မှတ်ချက်။ ။ လူရည်ချွန်ဆုတံဆိပ် လေးခုကိုဆက်၍ မတပ်ဆင်ရပါ။
(ငင) ငါးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်
ငါးနှစ်ဆက်တိုက် လူရည်ချွန်ဆု ရသူသည်၊ လူရည်ချွန် ငါးထပ်ကွမ်း ဖြစ်သည်၊ စတုတ္ထနှစ် ရရှိသော လူရည်ချွန်တံဆိပ်၏ ညာဘက်တွင် နောက်ဆုံးနှစ်ရရှိသော လူရည်ချွန် တံဆိပ်ကို တပ်ဆင်၍ ၎င်းတို့၏အပေါ် အလုပ်မှ သုံးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန် တံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ နှစ်ထပ်ကွမ်း၊ သုံးထပ်ကွမ်း ဆိုသည်မှာ နှစ်စဉ်ဆက်တိုက် လူရည်ချွန်ဆု ရသူများကိုသာ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ကျော်ရရှိသူများကို မဆိုလိုပါ၊ ယခင်နှစ်များက မည်မျှပင် ရရှိခဲ့သော်လည်း တစ်နှစ်ခြားသွားလျှင် ထပ်ကွမ်းလူရည်ချွန် မဖြစ်နိုင်ပါ၊ နှစ်ထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန် ရရှိပြီးသူသည် တတိယနှစ်၌ မရရှိဘဲ၊ စတုတ္ထနှစ်၌ လူရည်ချွန် ထပ်မံရရှိလျှင် သုံးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်ဟု မခေါ်နိုင်ပါ၊ ထိုသူသည် ယခင်နှစ်များက ရရှိခဲ့သော တံဆိပ်များကို တပ်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲ နောက်ဆုံးရရှိသည့် လူရည်ချွန်တံဆိပ် တခုတည်းကိုသာ တပ်ဆင်ရပါမည်။
(စစ) သင်္ချာ လူရည်ချွန်
သင်္ချာတွင်ထူးချွန်၍ လူရည်ချွန်အဖြစ် အရွေးခံရသူသည်၊ သင်္ချာလူရည်ချွန် ဖြစ်သည်၊ လူရည်ချွန်တံဆိပ် များကဲ့သို့ပင် သင်္ချာလူရည်ချွန် တံဆိပ်ကို လူရည်ချွန် တံဆိပ်များ၏ ညာဘက်တွင် ယှဉ်တွဲ၍ တပ်ရမည်။
မှတ်ချက်။ ။ ယခင်နှစ်က သင်္ချာလူရည်ချွန် ရရှိ၍ ယခုနှစ်တွင် သင်္ချာလူရည်ချွန် မရရှိဘဲ လူရည်ချွန်ဆုသာ ရရှိခဲ့သော ယခင်နှစ်က ရရှိခဲ့သည့် သင်္ချာလူရည်ချွန် ဆုတံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲ ယခုနှစ် ရရှိသော လူရည်ချွန် ဆုတံဆိပ်ကိုသာ တပ်ဆင်ရပါမည်။
ဃ။ တံဆိပ်တပ်ဆင်ခြင်း စည်းကမ်းများ
(ကက) လူရည်ချွန်ဝတ်စုံ အပြည့်အစုံ ၀တ်ဆင်ထားသည့် အချိန်များတွင်သာ လူရည်ချွန် တံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ရမည်။
(ခခ) အမျိုးသားဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ခဲ့သော် ပြည့်စုံသော အမျိုးသားဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်မှသာ တပ်ရမည်၊ မည်သည့် အမျိုးသား ၀တ်စုံမဆို ၀တ်ဆင်ထားခဲ့သော် လူရည်ချွန်တံဆိပ်ကို လူရည်ချွန်တံဆိပ်ကို အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ညာဘက်ရင်ဘတ် နေရာတွင်သာ တပ်ဆင်ရမည်၊ သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် သတ်မှတ်ထားခဲ့သည့် စည်းကမ်းချက်များ အတိုင်းသာ တပ်ဆင်ရမည်၊ အခြားမည်သည့် တံဆိပ်နှင့်မျှ ယှဉ်တွဲမတပ်ဆင်ရ။
လူရည်ချွန်ဆု ရသူများအား ရှေ့ဆောင်လူငယ် တံဆိပ်များကိုပါ လူငယ်သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ငါးချက်နှင့် ကျင့်ဝတ် ၁၂ အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ကတိခံစေပြီး ထုတ်ပေးပါသည်။ ယင်းတံဆိပ်ကို လူရည်ချွန်ဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်သည့်အခါတွင်၎င်း အရပ်ဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်သည့် အခါတွင်၎င်း လက်ဝဲဘက် ရင်အုံတွင် တပ်ဆင်ရပါမည်၊ လူရည်ချွန် ၀တ်စုံ ၀တ်ဆင်သည့်အခါ လက်ဝဲဘက်အိတ်၏ အပေါ် လက်နှစ်လုံး အကွာတွင်၎င်း၊ အမျိုးသားဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်သည့်အခါ ရင်ဖုံးအင်္ကျီ၏ လက်ဝဲအပေါ် ဒုတိယ ကြယ်သီးတံ၏ ထိပ်တွင်၎င်း တပ်ဆင်ရမည်။
လူရည်ချွန်များသည် ၀တ်စုံဝတ်ဆင်ထားသောအခါ၊ နာမည်စာတမ်းကို ညာဘက်အိတ် အလယ်တည့်တည့်တွင် တပ်ဆင်ရပါမည်၊ အမျိုးသား ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်သည့် အခါတွင် လက်ဝဲဘက် ရှေ့ဆောင်လူငယ် တံဆိပ်၏ အောက်တွင် တပ်ဆင်ရပါမည်။ စီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များသည်၊ စီမံကိန်း တံဆိပ်၏ အောက်တွင် တပ်ဆင်ရမည်။
လူရည်ချွန် စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖေါ်ရာတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် လူရည်ချွန် စီမံကိန်း ဗဟိုကော်မတီ၊ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မီတီ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အဖွဲ့စခန်းမှူး၊ စခန်းရုံး အဖွဲ့ဝင်နှင့် လူရည်ချွန်များနှင့်အတူ လိုက်ပါလာသည့် ဆရာ ဆရာမများအား ယင်းတံဆိပ်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ တံဆိပ်များသည် တမျိုး တပုံစံတည်းဖြစ်ပြီး ခုနှစ်သက္ကရာဇ် ရေးသားသည့် ပင်နီယံ၊ စပါးနှံတ၀က် ပါရှိသော စက်ဝိုင်းအတွင်းရှိ အရောင်ကို သုံးမျိုးခွဲခြား ထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ လူရည်ချွန်များအတွက် ဤတံဆိပ်ကို မပေးပါ၊ ရှေ့ဆောင် လူငယ်တံဆိပ် ရရှိထားပြီး သူများသည်၊ လူရည်ချွန် စီမံကိန်းတံဆိပ် တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် ရှေ့ဆောင် လူငယ်တံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ရန် မလိုပါ။
လည်စည်းသည် သုံးမြှောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ၍ အစိမ်းရောင် ဖြစ်ပါသည်၊ လည်စည်း၏ သဘောရည်ရွယ်ချက်မှာ အများအကျိုး ဆောင်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်သည် ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ လည်စည်းကို အသုံးချနိုင်သော နေရာများမှာ၊ ဒဏ်ရာရသူများအား ပတ်တီးသဖွယ် စည်းနှောင် အသုံးပြုရန်နှင့် အရေးတကြီး ချည်နှောင်ရန် လိုအပ်လာသော နေရာများတွင် လည်စည်းဖြင့် ချည်နှောင်ရန် စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ လူရည်ချွန် ၀တ်စုံသည် လည်စည်းပါမှသာ ၀တ်စုံအပြည့်အစုံဟု ခေါ်နိုင်ပါသည်၊ လည်စည်း စည်းသော အခါတွင်လည်း လည်ပင်းတွင်သာ စည်းကြရပါမည်။
လူရည်ချွန် ၀တ်စုံသည်၊ အဖြူရောင် ပတ်လည်လျှာပါသည့် ဦးထုပ်၊ အပြာနုရောင် အင်္ကျီ၊ နက်ပြာရောင် ဘောင်းဘီရှည်၊ ခြေအိတ်အဖြူနှင့် ပတ္တူဘိနပ် အဖြူများ ဖြစ်ပါသည်၊ လူရည်ချွန် ကျောင်းသူများအတွက် အထက်ပါ ၀တ်စုံအပြင် အပြာနုရောင် လက်စက အမျိုးသမီး အင်္ကျီနှင့် နက်ပြာရောင် လုံခြည်ပါ ၀တ်ဆင်ခွင့် ပြုထားပါသည်။ ဦးထုပ်၏ ရှေ့နှင့် အင်္ကျီ၏ ပခုံးတဘက်တချက်တွင် လူငယ်အ၀တ် တံဆိပ်များကို ချုပ်လုပ်တပ်ဆင် ထားပါသည်။
This entry was posted on September 2, 2013 at 1:42 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.